ကငျမရာတဈလုံး၏အခွခေံFocusing Settingမြားအကွောငျး တဈစတေ့ဈစောငျး – Digital Photography Myanmar
HomeBasic Photographyကင်မရာတစ်လုံး၏အခြေခံFocusing Settingများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
ကင်မရာတစ်လုံး၏အခြေခံFocusing Settingများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
August 15, 2016 Jedi Basic Photography 1
ကင်မရာ တစ်လုံး၏ အခြေခံ Focusing Setting များ အကြောင်း တစ်စေ့ တစ်စောင်း
***ဤဆောင်းပါးသည် ဓာတ်ပုံပညာရှင် ဦးစိုးလှိုင်၏ ခွင့်ပြုချက်ဖြင့် ပြန်လည်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဦးစိုးလှိုင်၏ အခြားသောဆောင်းပါးကောင်းများကို သူ၏ ကိုယ်ပိုင် blog ဖြစ်သော Country Road တွင်လည်း သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
ကင်မရာ တစ်လုံးကို သာမန် Auto Mode များ နှင့် ရိုက်ရုံ အဆင့်မှတစ်ဆင့် တက်ကာ ရိုက် မည် ဆိုပါက ကင်မရာ Setting ဆိုင်ရာ များအနက် အခြေ ခံ Setting များကို သိထားခြင်း ဖြင့်မိ မိ က ကင်မရာ ကို လိုသလို စေ စားနိုင် မည် ဖြစ်ပါသည်
ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ရိုက် တော့ မည် ဆိုလျှင် Focusing ၏သဘော များကို ကနဦး သဘောပေါက် ရန် လိုမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဓါတ်ပုံ တစ်ပုံ ကို ရိုက် ပါက ပြတ်သား မှု ရ ရှိရေး သည် အဓိက ဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့ ပြတ်သားရန် Focusing တိကျ ရန် လိုပါသည်။
Fousing အပိုင်းတွင် အဓိက Mode နှစ်ခု ရှိပါသည်။
မိမိ အနေနှင့် မည်သို့ Focus လုပ်လိုသည် ဆိုသည့် Autofocus Mode များ နှင့် မည်သ ည် နေရာကို Focus လုပ်လို သည်ဆို သည့် AF-Area Mode တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အောက် တွင် တစ်ပိုင်းစီ ကို ဖေါ်ပြ ပါမည်။
Autofocus Mode and AF-Area Mode
အထက်တွင် ဖေါ် ပြ ထားသကဲ့ သို့ ကင် မရာ များ တွင် ယေဘူယျ အားဖြင့် ဓါတ်ပုံ ရိုက်သူက မည်သို့ သော ပုံစံမျိုး နှင့် Focus လုပ် လိုသည်ကို ရွေး ချယ် နိုင်သည့် Autofocus Mode နှင့် မည်သည် နေရာ များ အား Focus လုပ် လိုသည်ကို ရွေးချယ် နိုင်သည့် အတိုကောက် အားဖြင့် ( AF-Area Mode ) ဟု ခေါ်သည့် Auto Focus Area Mode ဟူ ၍ နှစ်ပိုင်း ၏ ဆောင်ရွက် မှု များကို ဖေါ်ပြ ပါမည်။
အမှတ်စဉ် အတိုကောက် ဆောင်ရွက် မှု ကင်မရာ Control Panel တွင် မြင်ရမည့် မြင်ကွင်း
Subject ငြိမ်နေစဉ် ကင်မရာက အလို အလျှောက် Single-Servo ဖြင့် Focus လုပ်မည် ဖြစ်ပြီး
သာမန် ရွှေ့ လျှားသည့် အချိန် တွင် Continuous-servo သို့ အလိုအ လျှောက် ပြောင်း ကာ Focus လုပ် ပေး သည့် Mode ဖြစ်ပါသည်။ ကင်မရာ Firmware က သူ့ ဟာ သူ ဆုံး ဖြတ်ကာ Focus လုပ် ပါ လိမ့် မည်။
Single –servo AF လှုပ်ရှား မှု မရှိဘဲ ငြိမ်နေသည့် Subject ကို Single Point ဖြင့် Focus လုပ်ကာ ရိုက်သည့် Mode ဖြစ်ပါသည်။ လို သည့်နေရာ သို့ တစ်ဘက် ဇယား ကွက် ပါ အလယ် ရှိ Focus Point လေးကို ရွေ့ ယူ ကာ Focus လုပ်နိုင်ပါ သည်။
Continuous-servo AF ရွှေ့လျှားနေသည့် Subject ကို ယင်း ရွှေ့ လျှား နေသည် နောက် လိုက် ကာ Focus လုပ် ပေးသည့် Continuous Focusing Mode ဖြစ်ပါသည်။ Shutter-Release Button ကို တစ်ဝက် နှိပ် ထားပါက ကင်မရာ သည် Predictive focus tracking စနစ် ဖြင့် ရွှေ့ လျှားနေ သည့် Subject ၏ နောက် သို့ လိုက်ကာ တောက်လျှောက် Focus လုပ်နေပါ လိမ့် မည်။ Focus မိသည် ဖြစ်စေ၊ မမိ သည်ဖြစ်စေ Shutter-Release Button ကို နှိပ် ကာ ရိုက် နိုင်ပါသည်။
AF-Area Mode တွင်မူ Niko D-7000 ၏ View Finder ၌ တွေ့ ရမည့် မြင်ကွင်း ကို အောက် ပုံ တွင်နမူ နာပြထားပါသည်။ D-7000 Manual တွက် ပါရှိသည့် ပုံ ကို ပြန် ရိုက်ကူး ဖေါ်ပြ ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အထက်ပုံ တွင် ဖေါ်ပြထာသည့်-
Single Point AF သည် မိမိ ရွေးချယ် သတ်မှတ် ပေးသည့် နေရာ တစ်ခု ထည်း ကိုသာ Focus လုပ်ပါလိမ့် မည်။
9-Point dynamic –Area AF, သည် ထို 9-Point ဧရိယာ အတွင်း လှုပ် ရှားနေ သည့် Subject များကို Focus လုပ်ပါမည်။ ( အပြေး ပြိုင် ပွဲ တွင် များစွာ မမြန် လှဘဲ ဦးတည်ရာ တစ်ဘက်ထည်း သို့ ပြေးနေသည့် သီးခြား Subject များ အားရိုက် ရန် သင့် လျှော်သည့် Mode ဖြစ်ပါသည်။
21-Point dynamic – area AF, သည် အဆိုပါ 21-Point ဧရိယာ အတွင်း လှုပ် ရှာနေသည့် Subject များကို Focus လုပ် ပါမည်။ ( ဘောလုံးပွဲ ကဲ့ သို့ ဦးတည်ရာ အမျိုးမျိုး သို့ မြန် ဆန် စွာ ပြေးနေသည့် Subject များ အားရိုက် ရန် သင့် လျှော်သည့် Mode ဖြစ်ပါသည်။)
39-Point dynamic – area AF, သည် သည် အဆိုပါ 39-Point ဧရိယာ အတွင်း လှုပ် ရှားနေသည့် Subject များကို Focus လုပ် ပါမည်။ Focus ဖမ်းသည့်ဧရိယာ ကျယ် လာပါသည်။ (အလွန်လျှင် မြန်စွာ စွာရွှေ့လျှားနေသော ကြောင့် Frame လုပ်ရန် ခက်သော အရှိန် နှင့်ပျံသန်း နေသည့် ငှက် များကိုရိုက်ရန် သင့် လျှော်သည့် Mode ဖြစ်ပါသည်။)
3D Tracking သည် Shutter Release Button ကို တစ်ဝက် နှိပ်ထားပါ ပတ်ဝန်း ကျင် ရှိ အရောင် ( Colour ) ကို ကင်မရာ ကမှတ်ထားလိုက်ပြီး မိမိ မှတ်သား ပေးလိုက်သော အရောင်ရှိသည့် Subject ကို လိုက် ကာ Focus လုပ်ပါသည်။ နောက်ခံ အရောင် နှင့် Subject တို့ ၏ အရာင် များ နီးစပ်နေလျှင် ကင်မရာက Fous ယူ ရာ တွင် အခက်အခဲ ရှိပြီး မှားတတ် ပါသည်။ AF-A, AF-C တို့ နှင့် Tracking တွင် တွဲ သုံး နိုင်ပါသည်။
Auto-Area AF တွင် ကင်မရာသည် အလိုအလျှောက် Subject ကို Detect လုပ်ပါသည်။ Focus Point ကို ကင်မရာက ရွေးချယ် ပေးသည့် နည်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ခံ ရှုခင်း နှင့် လူ တို့ တွဲ ရိုက်ရာ တွင် Aperture ကျယ်ကျယ် ရိုက် ပါ မူ ရှေ့ ရှိ လူ ပုံ သေးသေး ထက် နောက်က ထင်ရှားနေ သည့် နောက်ခံ ကို Focus ယူ တတ် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် လိုအပ် သည့် လူ ပုံ သည် ပြတ် သား ခြင်း မရှိဖြစ်တတ်သည်ကို ကို သတိထားရ မည့် Mode ဖြစ်ပါသည်။
Autofocus Mode နှင့် AF-Area Mode တို့ တွဲ ကာ အသုံး ပြုခြင်း။
Nikon D 7000 ကို နမူ နာ ပြ ထားသည့် အတွက် ကင်မရာ Lens ၏ ကင်မရာ ကိုယ်ထည် နှင့် ထိနေသည့် ဘယ် ဘက် ဘေး က ခလုပ် ကလေး ကို ဖိ ကာ ကင်မ နောက်ရှိ Comand dile ကို လှည့် လျှင် Autofocus Mode ပြောင်း မည် ဖြစ်ပြီး ၊ ကင်မရာရှေ့ ရှိ Subcomand diule ကို လှည်း လျှင်
Autofocus Mode Autofocus Mode များ နှင့် တွဲ ဘက် သုံး နိုင်သည့် AF-Area Mode
1 AF-A AF-Area Mode အားလုံး နှင့် တွဲ သုံးနိုင်ပါသည်။
2 AF-S Auto- Area AF Mode နှင့် Single Point AF Mode နှစ်ခု နှင့်သာ တွဲ သုံး နိုင်ပါသည်။
3 AF-C AF-Area Mode အားလုံး နှင့် တွဲ သုံးနိုင်ပါသည်။ သို့ရာတွင် Subject ၏ လျှင်မြန်စွာ လှုပ် ရှားနေ သည့် အရှိန်ပေါ် မူတည်ကာ Subject 9-Poins, 21-Points, 39-Points Area Mode တို့ နှင့် တွဲ ဘက် သုံး ပါက ပို၍ တိကျ မှု ရရှိနိုင်ပါသည်။
( အလွန် မြန်သည့် ငျက် များ ပျံနေသည် ကိုရိုက်ပါက AF – (C ) ကို 39-Point ဖြင့် တွဲသုံးပါသည်။ ) D-7100 တွင် မူ 51-Point ဖြင့် တွဲ သုံးပါသည်။
အထက်ပါ Dynamic Mode များ တွင် အထက်ပုံ တွင်သာ 9-Poins, 21-Points, 39-Points တို့ ကို အစက် ကလေးများစွာ ဖြင့် Point များ၏ဧရိယာ ကို မြင်သာစေရ န် ပြထားစေကာမူ အမှန် တကယ် View Finder တွင် ကြည့် လျှင် Active ဖြစ်နေသော Active Focus Point လှုပ် ရှားနေသည် ကိုပင် မြင်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
အကြမ်း အားဖြင့် ဆိုရပါ မူ အရှိန် မြန် မြန် နှင့် ပျံသန်းနေသည့် အကောင် သေးသေး ငှက် များကို D 7000 တွင် မူ Auto Focus Mode ၏ AF-C နှင့် AF Area Mode တွင် ပါဝင်သည့် Dynamic 39-Point သာ ရှိ သဖြင့် Dynamic 39-Point သာ တွဲ သုံးသော် လည်း D 71000 တွင် မူ Dynamic 51-Point ရှိသဖြင့် အများ ဆုံး Focus Point ရှိ သည့် Dynamic 51-Point နှင့်သာ တွဲ သုံးပါသည်။
အကောင်ကြီးကြီး နှင့် ခတ် လေးလေး ပျံနေသည့် လင်းဒ ကဲ့သို့ ငှက်များ အတွက် မူ များ AF-Area Mode Point နည်းသည့် 9-Poins, 21-Points, တို့နှင့် လည်း တွဲကာ သုံးနိုင်ပါသည်။
AF-Area Mode ရှိ Single Point AF သည် မိမိ လိုသည့် နေရာကို ကွက် တိ Focus လုပ် သည် နည်း ဖြစ် သောကြောင့် Serious Photographer များ အများဆုံး သုံးသည် နည်း ဖြစ်ပါသည်။
မည် သို့သော တိတိကျကျ Subject မှ မပါသည့် ရှုခင်း ကဲ့ သို့ ပုံ များ ရိုက်သည့် အချိန်တွင်သာ ကင်မရာ က Focusing ကိုရွေး ချယ်သည့် Auto-Area AF ကိုသုံးကြသ ည်ဟု သိရှိရပါသည်။ သို့ ရာ တွင် Single Point Focus မျာ မူ မိမိ လိုသည့် နေရာ (Area) အား Focus လုပ် ခြင်း ဖြင့် မိမိ လိုသလို ထိန်း ချုပ် နိုင်ပါသည်။
Single Point Focus ကို စတင် သုံးစဉ်က Single Point Focus ကျရောက်သည့် နေရာ မဟုတ်သည့် အခြားသော နေရာ များ ၏ ပြတ်သား မှု အတွက် စိတ် ပူ မိခဲ့ ပါသည်။ Single Point Focus နေရာ သာလျှင် ပြတ်သားနေပြီး ကျန်သောအရာ များ ၏ ပြတ်သား မှု ကျ သွားးလေ မလား ဆိုသည့် စိုးရိမ် မှု ဖြစ်ပါသည်။
ဓါတ်ပုံသမား တစ်ဦးက “ သူသည် လူ သုံး ဦး ရင်ဘောင် တန်း ကာ ယှဉ် ၍ ရပ် နေရာတွင် အလယ် က လူ ကို Single Point Focusing လုပ်မည် ဖြစ် ကြောင်း၊ ဤ ကဲ့ သို့ လုပ်ရာ တွင် အဆိုပါ လူ ၏ ဘေး ဘယ်-ညာ ရှိ လူ နှစ်ဦး Focus မှ လွတ်ကာ မပြတ်မသား ဖြစ်လေ မည် လား” ဟူ သော မေးခွန်းကို Forum တစ်ခုတွင် မေး ခဲ့သည်ကို တွေ့ ခဲ့ ရပါသည်။
အဆိုပါ မေးခွန်းကို ၀ါရင့် ဓါတ်ပုံ ဆရာ တစ်ဦးက “ Focus doesn’t fall off side to side. It only falls off front to back.” Focus ၏ သက်ရောက် မှုသည် ဘေး တိုက် သက်ရောက်ခြင်း မရှိဘဲ ရှေ့ နှင့် နောက် တို့ တွင်သာ သက်ရောက်မှု ရှိသည်ဟူ၍ ပြန်လည် ဖြေကြား သည့် စာပိုဒ်လေး တစ်ခု ကို တွေ့ လိုက်မိပါသည်။
အကြောင်း မှာ Focus ဆိုသည် မှာ Plane of Focus တစ်ပြင် လုံးပေါ် တွင် တန်ဘိုး တူ ကျရောက် သည့် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
Single Point Focus သည် Focal Plain ပေါ် ရှိ မိမိ အလေး အနက် ပြလိုသည့် နေရာ ကို အတိအကျ Focus ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အောက်ပါ ပုံ များ မှာ Single Point Focusing ပေးထားသည့် နေရာ များကို နမူနာ ပြထားသည့် ပုံ များ ဖြစ်ကြပါသည်။ လေးထောင့် ကွက် ငယ်လေးသည် Single Point Focus နေရာ ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါပုံ မှာ မူ ပြေးနေသည့် ခွေးကို Auto-Area AF ယူ ထားသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည် ။ ပုံတွင် မြင်ရသော လေးထောင့် ကွက်များသည် Auto-Area AF ယူထား သည့် နေရ များဖြစ်ပါသည် ။ ကင်မရာက Single Point Focusing နှင့် Auto-Area AF တို့ တွင် Focus Point များ ယူ ပုံ ကို ထင်ရှားစွာ မြင်နိုင်ပါသည်။
အနီး ၊ အဝေး မတူ သည့် Subject များ အပေါ် ကျရောက်သော Focus
အောက်ပါ ပုံ မှာ Single Focus Point သည် နှုတ် ခမ်း ပေါ်တွင် ကျ နေသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ ကြောင့် Focus Point ၏ နောက် သို့ ရောက်နေသည့် မျက် လုံး မှာ ၀ါး နေသည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ နှုတ်ခမ်းကို အထူးပြု ရိုက် ကူးလိုလျှင် ဤ ပုံ သည် ကောင်းမွန် မှန်က န် သည် ဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့ သော် မျက်လုံးကို အထူးပြု ပြသ လိုသဖြင့် ရိုက်ကူး သည့် ပုံ ဖြစ်ပါမူ Focus လွဲ နေသည်ဟု ဆိုရပါမည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ Focus Point သည် မျက်လုံး ပေါ်တွင် ကျ ရမည့် အစား မျက်မှန်ပေါ် တွင် ကျ နေသည့် ပုံ ဖြစ်ပါသည်။ Focus သည် အထူးပြု ပြသ ရမည့် မျက်လုံး အစား ယင်း၏ နောက်တွင်ရှိ မျက်မှန်ပေါ်သို့ ကျော်ကာ ကျရောက်နေ သဖြင့် မျက်လုံး၏ပြတ် သား မှု သည် လျှော့ သွားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ISO 200, f2.0, Shutter Speed 1/1000.
အောက် ပါပုံ တွင် မူ Focus သည် Subject ၏ ပုခုံး တွင် ကျနေသဖြင့် ပုခုံး နှင့် ပု ခုံး ထက်ရှိ အင်္ကျီ ပြတ်သားနေပြီး ပုခုံး၏ ရှေ့ တွင် ရှိ မျက် နှာ အနည်းငယ် ၀ါး နေသည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။
ISO 100, f2.8, Shutter Speed 1/200.
အထက်ပါ ပုံ မှာ Apertureအကျယ် ဖြစ်သည့် f-2.8 နှင့် ရိုက်သည့် အတွက် Subject ပု ခုံး ၏ ရှေ့ နှင့် နောက် နေရာ များ ပြတ်သား မှု လျှော့ နေသော်လည်း Aperture f-16လောက် နှင့် သာ ရိုက်မည် ဆိုပါ Depth of Field ထူလာကာ ယခု ပုံ တွင် ၀ါး နေသည့် နေရာ များ သည် ပြတ်သား သင့် သလောက် ပြတ် သား လာ မည် ဖြစ်ပါသည်။
အထက် ပါ နမူနာ ပုံ များ အားလုံးသည် Aperture ကျယ်ကျယ် နှင့် ရိုက်ထားသည့် ပုံ များ ဖြစ်ပါသည်။ Apertureကျဉ်းကျဉ်း နှင့် ရိုက် မည် ဆိုပါက Single Focus Point ၏ အပြင်ဘက် အနီးပတ်ဝန်းကျင် နေရာ များရှိ ပြတ်သား မှု လျှော့နည်း နေသည်ကို ဤ ကဲ့ သို့ သိသာ နိုင်မည် မဟုတ်ပါ။
လူ တစ်ဦး ထည်း မဟုတ်ဘဲ တစ်ဦး ထက် ပိုသည့် လူ များကို ရိုက်ရာ တွင် လူ တစ်ဦး ၏ မျက်လုံး ကို Focus ဖမ်း ရပါမည်ဖြစ်ပြီး အခြားသူများ လည်း ပြတ်သား မှု ရှိလာစေရန် Aperture ကို လည်း လို အပ် သည် အထိ ကျဉ်း ပေးရန် လိုပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ တွင် လူ (၃) ဦး အနက် အလယ်ရှိ ခလေး ၏ မျက် လုံးကို Focus ဖမ်းထားပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ မှာ ခလေး အကြီး မလေး၏ မျက် လုံးကို Focus ဖမ်း ထားကာ ISO 100, f- 1.8, Shutter Speed 1/320 – Aperture ကျယ်ကျယ် ဖြင့် ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ပုံ ကို ပုံကြီး ချဲ့ ကြည့်ရာ တွင် Main Subject ဖြစ်သူ အကြီးမလေး၏ ဘယ်ဘက် ရှိ ခလေး ငယ်၏ မျက်လုံးမှာ Main Subject ၏ မျက် လုံး လောက် ပြတ်သား မှု မရှိ သည်ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ Aperture ကျယ် သည့် ရိုက်ချက် ဖြစ်သဖြင့် Single Point Focusing သည် Focus ထောက်သည့် နေရာ ကိုသာ အတိအကျ ယူ လိုက်သည် ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ အလေး ငယ် လေးမှာ Main Subject ခလေးမလေး ၏ အရှေ့ သို့ အနည်း ငယ် ရောက်ရောက်နေသည့် အတွက် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ ရာတွင် အောက်ပါ ပုံ မှာ မူ Focus Point ကို အလယ် ရှိ ခလေး ကိုသာ ယူ ထားသော်လည်း f-4, Shutter speed 1/ 320 ဖြင့် Aperture ကို ကျဉ်း ကာ ရိုက်သည့် အတွက် ဘေး နှစ်ဘက်ရှိ ခလေး ပါ ပြတ် သား နေသည် ကို တွေ့ နိုင်ပါသည်။ Aperture သည် အထက်ပုံ ရိုက်သည်ထက် ပို ကျဉ်း သည့်f–4ဖြစ် သော ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။
အောက်ပါ ပုံ တွင် Single Focus Point ကို ကစားစရာ အရုပ် ပေါ် တွင် ယူ ထားသည်။ Aperture f-1.8 ဖြင့် ရိုက်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ထို့ ကြောင့် ယင်းနော က် ရှိ လူ သည် ၀ါးနေပါသည်။
ISO 100, f1.8, Shutter Speed1/100
1 Comment on ကင်မရာတစ်လုံး၏အခြေခံFocusing Settingများအကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း
aung naing oo September 21, 2016 at 10:51 pm
တကယ်​မှတ်​သားထိုက်​တဲ့ အဖိုးတန်​ Key ​လေး​တွေပါ